शक्तिशाली देवीको मन्दिर जहाँ ऐनाले मात्र भरी भरीभराउ गरि राखिएको छ, हेला नगरी ॐ लेखी भेटी स्वरुप सबैले सेयर गरौ – Krazy NepaL
April 11, 2021 441
सिन्धुली । हामीलाई देवी देवतामा धेरै बिश्वास गर्छौ । र परम्परा देखि पुजाआजा, दान, धर्म, बर्त हरु गर्दै आइरहेका छौ । नेपाल धार्मिक दृष्टिले पनि बिशेष महत्व बोकेको देश हो । यँहा देखि देवी देवताको मठ मन्दिर हरु पनि छ।
त्यस्तै औता मन्दिरको बारेमा भन्न गैरहेका छौ।पूर्वी पहाड र मध्य तराईबाट राजधानी भित्रिने सबैभन्दा छोटो दूरी मा रहेको छ बिपी राजमार्ग । जहाँ दैनिक साना ठुला गरि हजारौं सवारी साधन चल्ने गदर्छ, जुन मार्गलाई जापान सरकार को सहयोग मा निर्माण गरेको हो।
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–५, मुलकोट नजिकै रहेको रिट्ठे भीरको तल अक्कर भीर र सुनकोशी नदी रहेको छ । काठमाडौंबाट बनेपा–धुलिखेल–भकुण्डेबेसी– नेपालथोक हुँदै खुर्कोट नजिकै रहेको ठाउँ हो रिट्ठे भीर ।
अन्य समाचार, प्रकृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेरपनि मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन । हुन त विज्ञानले केही चमत्कार गरेको छ ।त्यसले प्रकृतिक धेरै चुनौती दिन सकेको छैन ।
महिलाहरूले पनि आफूलाई सुन्दर देखाउन ती भागहरूलाई जोडतोडले मिहेनत गरेर सुन्दर राख्छन् । पुरुषहरूका नजर पनि त्यतै जाने गरेका हुन्छन् । हाम्रो नेपाली समाज होस् वा पश्चिमा या भारतीयहरू नै किन नहुन महिलाहरू आफ्नो छातीलाई आकर्षक देखाउन ज्यान छाडेको प्रष्टै देख्न पाइन्छ छाती मात्रै होइन कम्मर र पछाडिको भाग पनि महिलाहरूले सकेसम्म पुरुषले हेरिदेओस् भन्ने चाहना राख्ने गरेको समचारमा उल्लेख छ।
अन्य समाचार हिले भाकल भनेको के हो भन्ने उत्तर तर्फ भाकल भनेको हामीले कुनै पनि देवीदेवता सँग गरिने भाका हो । एक किसिमले भनौभने भाकल भनेको भाका नै हो । भाकल गर्ने व्यक्तिले केही पाउँ, कुनै व्यापार व्यवसाय गर्दा राम्रो होस, बिरामी हुँदा ठीक होस वा कसै सँग टाढा बसौं भनी आफ्नो ईच्छा अनी आफुले छनौट गरी त्यसो पुरा गरेमा म यो दिन्छु वा यसो गर्छू वा कुनै कुराको बली दिन्छु अथवा भेटी पैसा नै चढाउँछु भनी कुनै मन्दीरमा या आफ्नो मन मनै गरिने भाका हो।
यसको बैज्ञानीक कारण यस्तो छ यदी कसैले भाकल गरे अथवा कुनै कुरा गर्छु भनी भाका गर्दछ त्यो समयमा त्यसले आफुले बोलेको भाका पुरा गर्न सकेन भने उसको शरिरमा भएको आज्ञा चक्रले काम नगरेको भन्ने बुझिन्छ अथवा उ कुनै पनि कुराको निर्णय लिन नसक्ने मान्छे भन्ने बुझिन्छ ।
उसले कुनै पनि कुरामा अडिक रहन सक्दैन । त्यसैले आफुले बोलेको कुरा पुरा गर्न सक्ने मान्छे मात्र जिवनमा अघि बढ्दछ । त्यसैले भाकल (भाका) बोल्दै नबोलौ बोलेको कुरा पुरा गरौं, सत्य मानिसको साथ सबैको आशिर्वाद प्राप्त गर्दछ र त्यस्ता मानिस सँग देवीदेवता पनि प्रशन्न हुन्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
यदी कसैले भाकल बोलेर पुरा गर्दैन भने उसको भाग्य नै बिग्रिएर जान्छ किनकी हाम्रो जिवनको सात चक्र मध्ये सबै भन्दा महत्वपूर्ण चक्र भनेको आज्ञा चक्र हो । आज्ञा चक्र भनेको हाम्रो सात चक्र मध्येको राजा चक्र हो । जसको आज्ञा चक्रै बिग्रन्छ उसले जिवनमा कहिले पनि उन्नती प्रगती गर्न सक्दैन ।
त्यसैले आफ्नो आज्ञा चक्र बलियो बनाउने वा कमजोर बनाउने आप्mनै भित्र भएको कुरा हो । त्यसैले आप्mनो आज्ञा चक्र बलियो बनाउनु छ भने आफुले बोलेको भाकल समयमै पुरा गर्नु पर्दछ ।नबुझाएमा के हुन्छ त ? यही आज्ञा चक्र कमजोर भएपछि मानिसहरु धेरै कुरा सोच्न थाल्दछ आफुले गरेका कामहरु बिग्रिन थालेपछि उसले आफुले गरेको भाकलहरु सम्झन थाल्दछ र यसो हुँदा उसले भाकल बोलेको देवीदेवता सम्झन थाल्दछ ।
यो ताप्लेजुङ जिल्लाको १२ हजार फिट उचाइमा रहेको छ । विश्‍वास आस्था एवं पवित्रताकी देवी पाथीभराको यो पवित्र स्थल ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम फुङ्गलिङबाट १९.४ कि.मी. पूर्वोत्तरतर्फ ३७९४ मी.को उचाईमा अवस्थित छ । यहाँ फुङ्लिङ बजारबाट १ दिन पैदल हिँडेर पुगिन्छ ।
यो मन्दिरमा वर्षभरि भक्तजनहरुको घुइँचो लाग्‍ने गर्दछ ।अन्नभरेको पाथीझैं सुन्दर, मनमोहक आकृति बोकेको पाथीभरा पहाडको शिखरमा (टुप्पोमा) देवीको उत्पतिस्थल रहेकोले यी देवीको नाम “पाथीभरा देवी” भनि श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक पुकारिन्छ। ताप्लेजुङ्गका रैथाने लिम्बू समुदायहरू पाथीभरालाई “मुक्कुमलुङ ” भनेर चिन्दछन । लिम्बूभाषामा “मुक्कु”को अर्थ शक्ति वा बल, “मलुङ ”को अर्थ बोट भन्ने जनाउँदछ। अर्थात लिम्बूजातिहरू पाथीभरालाई शक्ति वा बलको श्रोत वा बाटोको रूपमा प्रकट गर्ने गर्दछन।
Prevधनी बन्ने यी चार तरिका आजै फलो गर्नुहोस् यसो गर्नाले ठुलो धान लाभ मिल्छ ।
Next३ साता शैक्षिक संस्था बन्द